Global Voices teny Malagasy » Niseho Teo Anatrehan’ny Fitsarana Emirà Arabo Mitambatra Ilay Mpanao Gazety Jordaniana Rehefa Niandry Herintaona Mahery · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Febroary 2017 4:43 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Liva Andriamanantena
Niseho  teo anatrehan'ny Fitsaran'ny Fiarovam-panjakana ao Abu Dhabi Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny 1 Febroary ihany Tayseer Al-Najjar, Jordaniana mpanao gazety, voatazona rehefa niandry ny fitsarana azy nandritra ny herintaona mahery. Nahemotra ho amin'ny 15 Febroary  ny fitsarana noho ny fangatahan'ny mpisolovavany.
Eo ambanin'ny Lalànan'ny Heloka An-tserasera  taona 2012 andininy faha-29 ao Emirà Arabo Mitambatra, ny famoahana fanambarana, toro-hevitra, vaovao na tsaho “miaraka amin'ny fikasana hanao esoeso na hanimba ny laza, voninahitra na ny satan'ny fanjakana, ny andrim-panjakany sy ny mpitondra ao aminy dia heloka saziana vonjimaika an-tranomaizina miaraka amin'ny onitra . Tsy noho ny fanenjehana fotsiny noho ny fanehoan-keviny, izay tsy mahazatra ao amin'ny firenena Emira Arabo Mitambatra no mampiahiahy momba ny raharaha mahakasika an'i Najjar, fa noho ny fanambaràna izay nataony talohan'ny nifindrany tao amin'ny firenena ihany koa mba hiasa ho mpanao gazety ara-kolontsaina ho an'ny gazety iray eo an-toerana .
Mpanoratra, mpanao gazety sady mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Gazety Jordaniana (JPA), niasa  tao amin'ny sampana ara-kolontsaina tao amin'ny gazety Al-Dostour mivoaka isan'andro ao Jordania i al-Najjar. Tamin'ny Aprily 2015, nifindra tany Abu Dhabi izy izay nanombohany niasa ho mpitati-baovao ara-kolontsaina ho an'ny gazety al-Dar, izay sampan'ny foibe ara-Kolontsaina sy ny Fampitam-baovao Aljewa an'ny governemanta.
Fomba fanao mahazatra ao amin'ny firenena Emirà Arabo Mitambatra ny fampanjavonana ankaterena ireo mpikatroky ny zon'olombelona sy ireo maneho fotsiny ny heviny an-tserasera. Matetika no iharan'ny fitsarana lava sy tsy ara-drariny ireo voafonja noho ny fanehoan-keviny. Amin'ny raharaha iray hafa mitovy aminy,notànana any am-ponja nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2015 noho ny sioka mitsikera an'i Egypta i Nasser Bin Ghaith , mpampianatra oniversitera, ary tsy nahazoam-baovao nandritra ny sivy volana. Nahemotra imbetsaka ny fitsarana azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/11/95260/
 Nahemotra ho amin'ny 15 Febroary: http://echr.org.uk/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85-15-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A